Dhowr Sabab Oo naagaha ku kalifa in ay gogol dhaaf sameeyaan-VIDEO - iftineducation.com
Waxyaabaha ugu badan ee haweenka khiyaamada ku kalifa ayeynu ka soo qaadan doonaa afartaan soo socda;
Waxay khiyaamada Gabadhu u gashaa si ay farxadeeda ugu raadiso: Dumar badan baa khiyaamada ku kaca si ay farxadooda u helaan, ugana kasbadaan waxyaabo ay aad u xiiseeyaan lamaanahooda, danaha iyo waxyaabahay jecel yihiin waxay badana haweeku ku hoggaamiyaan inay khiyaamo la yimadaan.
Khiyaamada noocan ah maaha mid la xidhiidha cadiifadooda, balse waa wax ka baxsan oo ku saabsan farxad gelinta amma siday u heli lahayd gabadhu wax farxad ku abuura.
Hinaase dartii: Gabadh kasta waxay jeceshay in lamaanaheedu ku kalsoonaado, waxaanay ku kacdaa khiyaamo haddii ay saygeeda amma ninkay jeceshahay ka dareento inuu meelo kale halacsanaayo, iyadoo isku dayda khiyaamooyin badan oo ay ku soo ceshanayso qofkay maanka ku hayso.
Saygeeda amma qof ay jeceshay oo ay ka dareento dayacaad iyo dhayalsi: Gabadh kasta markay dayacaad iyo dhayalsi ka dareento saygeeda amma qofkay doonayso inay nolosha la qaybsato waxay ku kacda khiyaamo badan oo ay ku toosinayso isaga.
HALKAN KA DAAWO FILIM LAGA JILAY: